Amanani ezitolo nosayizi yokukhokha izinsiza zikamasipala kuphela yanda, futhi impesheni wonke bayafana. . Isimo akakwazi ukukhulisa inani izinzuzo imali ngesikhathi esifanayo bonke abantu abadala, kodwa kuze enzelelo them! Ngemali okhethekile umhlalaphansi ziye kwethulwa. Okokuqala, basuke okuhloswe ngazo ukunciphisa usayizi Umbuso izikweletu, okungukuthi, yebo, ukwesekwa okukhulu ekunakekeleni asebekhulile.
Ubani ongafaka abathola isibonelelo
Azoqedwa - akusho ngokuzenzakalelayo ufaneleke izinzuzo Ezezindlu. Kufanele kuqashelwe ukuthi uxhaso ukuze umhlalaphansi Tinsita - akuyona izinzuzo kuphela ezikhona. Eminyakeni emithathu edlule, e-Russian Federation 46 imikhakha izakhamuzi bekufanele bazidle izinzuzo ahlukahlukene, kuhlanganise:
amaqembu ekhubazekile I neyesi-II, okuyinto ngokusemthethweni ziqinisekisa isimo sabo;
abantu abakhulisa ingane abanokukhubazeka;
abahlanganyeli ngokuphelele PHI lwa, kuze kube sesikhathini samanje;
abazali, abangane bomshado kanye namanye amalungu omkhaya ezempi, amaphoyisa, njll, kanye namalungu omndeni lababuleweyo noma ezingekho .;
abantu abathintekile yingozi yaseChernobyl;
izakhamuzi Leningrad bevimbezela futhi eMoscow;
abazali abakhulisa izingane ezintathu noma ngaphezulu ngaphansi yobudala;
Izakhamizi abaye ukhishwa isihloko of anikelelwe Honorary of Russia noma eSoviet Union.
Uxhaso kwezindlu kanye nezinsiza ohlanganyelwe futhi bathembele impesheni kanye zabasebenzi Veterans. Ukuze bathole lokhu isikhundla, kumele ube ngemuva okungenani iminyaka engu-30 ubudala.
Kuzuze abombutho osethathe umhlalaphansi libanakekele ekhethekile. Isebenzisa kweminye imigomo nemibandela, kunokuba ekulungiseleleni impesheni abavamile uxhaso Tinsita.
Ngakho, izinzuzo kungukuthi enikeziwe ukukhokhela izindlu kanye nezinsizakalo zomphakathi, futhi ukuthenga izindlu zangasese noma isakhiwo. Uma impesheni enesizungu, wabeka izindlu endaweni esingeqile 32 m 2, uma umndeni liqukethe abantu ababili - 42 m2, futhi uma nje, bese endaweni udinga ukwengeza 18 m 2 ilungu ngalinye lomndeni.
Ngaphezu kwalokho, umhlalaphansi empini bengase kancane ukwandisa lokhu kuyinsakavukela, nangabe umsebenzi sele eside ngaba nesikhundla ehamba phambili, wahlanganyela isifundiso, noma degree noma wathola eminyakeni yesevisi ezinegunya (uColonel ubuncane).
Kufanele kuqashelwe ukuthi izinzuzo enqwabelene amafomu eziningana.
Eyokuqala - ukudluliswa kweemali. Thola impesheni uxhaso kungaba ekhawunteni ebhange, ikhadi yasebhange noma engakanani ingxenye yezimali azofakwa zosayizi ojwayelekile kwezimpesheni.
Esesibili - ukuhlinzekwa "izaphulelo" izinkokhelo ayimpoqo (Izinsiza). Kuyaphawuleka ukuthi angeke uMbuso ukukhokhela yabo umuntu siqu asekhulile izinkokhelo wokweshumi. Uhlu kwemisebenzi yomphakathi ikhokhwe abahlanganisi kwaphela cable TV, ukususwa kukadoti kanye nokukhokhwa fuel, uma indlu ayixhunyiwe Ukushisa emaphakathi.
Kufanele kuqashelwe ukuthi, njengoba umthetho, isaphulelo imayelana 50% of the namarisidi Imininingwane.
Ngeshwa, iziphathimandla musa ngokwabo ukunikeza kwanoma iziphi izinzuzo kubantu asebekhulile. Zonke lawa malungelo kukhona declarative ngokwemvelo.
Indlela yokwenza isibonelelo Izinsiza impesheni? Okokuqala, ingabe kudingeka nitshele yini isifiso ukusizakala ngelungelo isiphathimandla esifanele. Ngokuvamile, abadala abaphendukela umnyango wezokuphepha komphakathi, okuyinto kakade ngalesosikhathi fikisa ngokwakho ekupheleni inqubo.
Uma uxhumana no-wezenhlalakahle kumele abe iphasipoti, isitifiketi nemali yempesheni. Kumele kukhunjulwe ukuthi iziphathimandla ngeke ukucubungula izicelo amagranti labo izakhamuzi abangekho ayekweleta resursosnabzhayuschimi izinkampani.
Kufanele kuqashelwe ukuthi izinzuzo kanye nemixhaso akuzona unomphela. isikhathi sawo sokuba esingangezinyanga eziyisithupha, ngemva kwalokho lo muntu osekhulile ukufaka isicelo kabusha kusiphathimandla esifanele ngesitatimende efanayo futhi usuphinda futhi.
Kuyinto engenakwenzeka ukuqonda ke umbuzo: kanjani ukukhipha isibonelelo kuya impesheni, uma ungaziboni uhlu oluphelele imibhalo edingekayo. Kubalulekile nokukhumbula ukuthi akunandaba ukuthi ndoda yanquma ukuthola - uxhaso noma Isaphulelo izindlu kanye nezinsizakalo zomphakathi. Kunoma ikuphi, uhlu izibambiso ukuba nabo benze okufanayo.
Ngakho-ke, uxhaso kudingeka ube:
idokhumenti kuqinisekisa ilungelo kokuhlala efulethini;
idokhumenti kuqinisekisa ilungelo lokuthola izinzuzo. Lokhu kungaba isitifiketi yempesheni, sobudala namanye amaphepha.
Njengoba ubona, uhlu akuyona omkhulu kangaka, ngakho ukuqoqa-non-ukusebenza kwakhe umuntu ngeke kube nobunzima, ikakhulukazi njengoba ngizazi ukuthi ekukhokheni enikiwe eningi ngokwanele.
Ukubalwa isibonelelo nalokho nemibandela ingasebenza impesheni
Awunawo usayizi ilungiswe ukuhlinzekwa imixhaso impesheni. Kukhona ifomula ukuthi isetshenziselwa kubalwa isikhundla izinzuzo. Siqukethe isamba ukuthi impesheni uchitha nyangazonke yokukhokha ngezidingo kanye endaweni ejwayelekile. by endaweni amazinga amiswa ezingeni lesifunda.
Ukuze impesheni banikezwe isibonelelo noma inzuzo, kumele uhlangabezane nezimfuneko ezithile:
ke kumele abe yisakhamuzi we Russian Federation, futhi bathole imvume yokuhlala kuleli kheli, lapho ucela izinzuzo;
umuntu kumelwe akhokhe njalo amahlumela, embukisweni "resursnikami";
impesheni akufanele ukuchitha ku Umbuso izinkokhelo ezingaphezu kuka kwezinkambiso aqine. Kuyaphawuleka ukuthi "uphahla" ngezidingo zayo izinkokhelo zomphakathi esifundeni ngasinye.
yisakhamuzi Russian futhi izizathu mayelana nokwenqatshwa kokunikezwa uxhaso
Futhi kuthiwani ngalabo umhlalaphansi abanokuhlangenwe yokuhlala eside futhi komkhuba endaweni WaseRussia, kodwa akuzona izakhamuzi zezwe? Ngempela, abakwazi ukukhipha izibonelelo impesheni?
Empeleni, ayikho into engenakwenzeka. Nokho, kungenzeka ukuthola ilungelo kulesi simo, kubalulekile ukuthi unikezele ngenkontileka othize, lapho ilungelo umuntu osekhulile njengoba siphila kuleli izindlu. Ukuze uthole efulethini futhi akufanele kube khona izikweletu.
Kodwa ungakhohlwa ukuthi uxhaso ungakwazi kokubili ukudweba bese adubule. Kungani lokhu kwenzeka?
Ngempela, kungenzeka inzuzo kukhanselwe uma inqubo kutholakala ukuthi umuntu akasenawo ilungelo lokunika amalungelo.
I-exemption sisuswa ngokuzenzakalela uma impesheni ngokukholwa okuhle uhambisane nemigomo ye ekunikezeni kwayo, kuhlanganise namarisidi sokukhokha izinsiza. Umxhaso isuswe, uma impesheni unomsebenzi ukukhokha irenti izinyanga ezimbili.
Ngakho, ukuze baqonde ngokugcwele indlela imali yoxhaso kwabahola impesheni, kubalulekile ukuqoqa lonke ulwazi bese uzindla.
umhlalaphansi Military nazo ufaneleke ukuthola izibonelelo, Nokho, zonke izimali ezibekelwe kungenziwa iqondiswe kuphela ukuthenga efulethini abo noma isiphakamiso sokwakha isakhiwo yokuhlala olulodwa.
Ukuze ukwazi ukufaka isicelo sezinzuzo yokukhokha ngokwengxenye ngezidingo ungasebenzisa i-inthanethi.
Uma umuntu okwakuthiwa uletha eziningi izinzuzo, inganikelwa eyodwa kuphela. I impesheni ungakhetha okuyinto ngconywana kuye.
Uma Umbuso nyangazonke okubiza kakhulu ukuba iziphathimandla lesifunda esungulwe evamile owayesethathe umhlala-phansi futhi ulindelwe ukuthola uxhaso. Ilungelo akuvunyelwe.
umhlalaphansi Military ungathola indawo isinxephezelo yabo kanye kuphela.
Uma wayefisa, impesheni inelungelo ukukhipha isibonelelo nganoma iyiphi ebhange elula, uthole imali ikhadi ebhange, noma hlola Ukudluliselwa ngokusebenzisa eposini.
Futhi ekugcineni, ekuklanyweni imixhaso kanye nemivuzo belulekwa ukuxhumana Department of Social Ukuvikelwa.
Impahla kanye non-impahla ubudlelwane kulawulwa umthetho civil
Umqondo wokuthi icala lentela, izinhlobo emacaleni kwentela kanye intela izinhlawulo kubo
Indlela ukuchitha lesifunda womama inhlokodolobha
Awama-Soap ngoba Ustinova: uhlu izithombe ezithakazelisayo